Dagaalo ka qarxay Gobolka Sitti – Xeernews24
Dagaalo ka qarxay Gobolka Sitti
25. Februar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Wararka naga soo gaadhi gobolka Sitti gaar ahaan degmada mayso waxaay sheegeyaan in ay maalmihii la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo u dhexee Soomaalida Ethiopia iyo Oromadda oo baryahaan dambe ay u dhaxaysay isku dhacyo ku salaysan siyaasadda kacsan ee dalka Ethiopia.
Dagaalada oo cududoodu ka dhacday tuula yar ee la yidhaahdo Hardiin oo caasimad ahaan ugu magaacaban degmada Mayso.
Ka dib marka ay soo weerareen kooxa oroma ah halkaana ku dileen askari ka dirsan maleeshiyaad u shaqeeya Kililka Soomaalida ka dibna xaalada ayaa faraha ka baxday oo waxaa goobaha u dhaw-dhaw tuulada Hardiin ka dhacay iska hor-imaad dad badan oo laba gees ah ku dhinteen.
wararku waxay intaa ku darayaan dhismashadda Soomaalidu in ay tahay ila 5 qof halka dhanka Oromada aan laga hayn tiro rasmi ah ee dagaalka ku dhintay iyo khasaaraha soo gaadhay inta u leeg yahay.
Gurmada xoojin ah ayaa Soomaalida uga yimid degmooyinka kala ee gobolka Sitti gaar ahaa beesha ciise haseyeesha waxaa soo kala dhex galay cidamada dawlada Feedaraalka Ethiopia oo lagu eedeyn in ay Oromada la safteen.
Maamulkii ina Iley ee magaalada Jig-Jigga ila hada wax war ah lagama hayo dagaalka ka socda gobolka Sitti sida la ogyahay dagaalkan ka qarxay gobolka Sitti wuxuu daba ku hayaa dagaale kale oo ka dhacay degaanada Soomaalida iyo oromada wanaa dagaal ay dawlada Ethiopia ugu tala gashay in ay iskaga jeediso kacdoonka ay wada qaar ka mdi ah qowmiyadaha dulman ee ku hoos nool xukunka dalka Ethiopia.
Wixii warar ah ee ka soo korhda kala socda XeerNews24.com
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/Breakingnews.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-02-25 21:18:452017-02-25 21:19:51Dagaalo ka qarxay Gobolka Sitti
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo deg deg iska Casilay Maamulka shirkadda Soma Oil... Madaxweyne Farmaajo oo booqday Xabsiga Dhexe ee Muqdisho (Sawiro)